Sawirro: Maxkamad Taliyaani ah oo 30 sano oo xarig ah ku riday nin Soomaali ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Maxkamad Taliyaani ah oo 30 sano oo xarig ah ku riday nin Soomaali ah
14th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Maxkamad ku taalla dalka Taliyaaniga ayaa xukun dheer ku riday nin Soomaali ah oo loo heysto inuu mas’uul ka ahaa dhimashada muhaajiriin farabadan, kuwaasoo doon ay la socdeen ku degtay badda u dhaxeya Liibiya iyo Taliyaaniga.
Maxamuud Cilmi Muxudiin oo ah muwaadin Somaliyeed, ayaa wuxuu ka soo muuqday Maxkamadda Magaalada Palermo ee dalka Talyaaniga, iyadoo Maxkamaduna ku riday xabsi muddo 30 sano ah.
Ninkaan, ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu ka masuul ahaa dhimashada 336 qof oo tahriibayaal ah, oo la socday dooni ku degtay Jazeerada Lampedusa, xilli doonidaasi ka soo shiraacatay xeebaha dalka Libya.
Maxamuud Cilmi Muxudiin oo 34 sano jir ah, ayaa waxaa sidoo kale lagu helay in uu ku kacay galmo ka dhan ah dumarkii la socday doonida ku degtay xeebaha dalka Talyaaniga.
Xoogaga Booliska ee Lampedusa, ayaa gacanta ku soo dhigay ninkaasi, xilli uu isku dhex qarinaayay tahriiba-yaashii ka badbaaday shilkaasi, waxayna Boolisku horkeeneen sharciga, si cadaaladda loo waafajiyo.
Booliska Talyaaniga, ayaa xabsiga u taxaabay ninkaasi 8-dii bishii November ee sanadkii 2013-k. Xilli doonidu ay quustay 3-dii bishi October.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Kooxda La dagaalanka Burcad Badeeda ee Palermo, Geri Ferrara, ayaa sheegay inay Maxkamaddu ka codsadeen in xukun adag lagu rido ninkaasi, isla-markaana ay Maxkamaddu aqbashay in lagu qaado xukun xabsiyadeed oo dheer. Si ay dersi ugu noqoto kuwa kale ee wadadaasi ku taagan.
Boqolaalka ruux ee ku dhintay doonida quustay, ayaa waxay intoodu badan ka soo kala jeedeen dalalka Somaliya iyo Eritrea, sida ay xaqiijisay Maxkamaddu.